•Inhlangano i-SAVF icela ukufuniswa ubaba kaLindelwa Zaca owazalwa ngomhlaka 11/01/ 2002 ohlala eMbali.
Igamalikamama wakhe uKhethiwe Phinkie Zaca osadlula emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNks M Buthelezi enombolweni ethi: 033 342 1229.
•Inhlangano i-SAVF icela ukufuniswa ubaba kaSinokuhle Dlamini owazalwa ngomhlaka 31/05/2017. Igama likamama uDudu Dlamini. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNks M Buthelezi enombolweni ethi: 033 342 1229.
•Inhlangano i-SAVF icela ikufuniswa ubaba kaBandile Dlamini ozalwa ngomhlaka 16/11/2015. Igama likamama wakhe uNompumelelo Dlamini. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNks M Buthelezi enombolweni ethi: 033 342 1229.
•Sicela ukufuniswa umama kaNosipho Dlamini igama lakhe kunguMakutloano Dlamini owagcina ukubonakala eminyakeni emibili edlule. Kuthiwa uhlala ka number 24532 eduze kwaseZuma Store kanti usebenza epulazini eliseGreytown. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uMajola enombolweni ethi: 033 505 0083.
•Sicela ukufuniswa abazali ba-Amathada Dlamini. Umama wakhe uZanele Dlamini (ongaziwa) kanti ubaba wakhe akaziwa. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNkk Z.H Mazibuko enombolweni ethi: 033 392 8605.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaMbali Mchunu ozalwa uLindiwe Eunice Sibiya waseTrustfeed ongasekho emhlabeni. Igama likababa wakhe uDavid Sabelani Mchunu waseMsinga.
Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uZama Mbambo enombolweni ethi: 033 502 2188.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaNontando Shezi ozalwa uSizakele Shezi waseTrustfeed ongasekho emhlabeni.Ubaba wakhe kuthiwa uMr David ongaziwa.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaKhethukuthula Ngcobo ozalwa uHlengiwe Joyce Ngcobo waseTrustfeed ongasekho.
Ubaba wake kuthiwa uMoses Cele wasePort Shepstone okusolakala ukuthi akasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uZama Mbambo enombolweni ethi: 033 502 2188.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaThandolwethu Sibiya wozalwa u-Eunice Lindiwe Sibiya waseTrustfeed ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uZama Mbambo enombolweni ethi: 033 502 2188.
•Inhlangano ka SAVF icela ukufuniswa abazali baka Lubanzi Makhathini ozalwa ngomhlaka 15/03/2018.
Igama lika mama wakhe u Gugulethu Makhathini.
Onolwazi sicela athinte uSonhlalakahle M Buthelezi enombolweni ethi: 033 342 1229.
•Sicela ukufuniswa uEunice Ntshangase noma Ntuli owumama kaSipho noSimphiwe Ntshangase abangamawele.
Kusolakala ukuthi wayehlala KwaNxamalala (Sweetwaters) ubaba wezingane uShiyo Robert Mngadi KwaMpumuza ongasekho emhlabeni.
Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uBongiwe Zondi enombolweni ethi: 033 342 0141.